Shacab Lagu Af-Duubtay Gobolka Sool | KEYDMEDIA ONLINE
Wararka aan ka imaanaya Gobolka Sool ayaa sheegaya in halkaas xalay fal af-duub ah loogu geystay dad shacab ah, kuwaasi oo aan weli la ogeyn halka la la aaday.
TALEEX, Soomaaliya - Ilo wareedyo deegaanka ah ayaa ku waramay in dadkaan ay kooxo hubaysan ka af-duubteen deegaanka carrooley, xilli ay ka yimaadeen beeraha xallin oo ka tirsan degmada Taleex ee Gobolka Sool.
Wararka ayaa waxa ay sheegayaan in kooxda af-duubka gaysatay ay ahaayeen maleeshiyo beeleed hubaysan, kuwaas oo sida la wariyay ka caraysan nin lagu magacaabo Cabdikariin Cali Nuur oo Soomaaliland ku xirtay magaalada Berbera.
Wararkii ugu dambeeyay ee halkaa laga helayo ayaa sheegaya in ay socdaan baaritaano lagu raadinayo halkii ay ku dambeeyeen dadkii la af-duubtay, waxaana taagan xiisad falkaas ka dhalatay.
Ma ahan markii ugu horaysay oo af-duub noocaan ah uu ka dhaco Gobolkaas, dhawaan ayayna aheyd markii sidaan oo kale degaanka Tuka-raq ee Gobolka Sool lagu af-duubtay dad shacab ah oo safar ahaa.